काउकुती लागेपछि किन उठ्छ हाँसो ? – Hamro24News
काउकुती लागेपछि किन उठ्छ हाँसो ?
July 9, 2021 adminLeaveaComment on काउकुती लागेपछि किन उठ्छ हाँसो ?
एजेन्सी । बच्चाहरूलाई हँसाउनका लागि प्रायः काउकुती लगाइने गरिन्छ । अनि उनीहरू खुलेर हाँस्छन् । बच्चालाई मात्र नभई ठूला मान्छेलाई पनि शरीरका निश्चित अंगमा काउकुती लगाउँदा हाँस उठ्छ । तर किन काउकुती लाग्छ र लागेपछि किन हाँस उठ्छ कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ ?**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
वैज्ञानिकहरूका अनुसार काउकुती लगाउँदा शरीर खुम्चिन्छ । अनि हाड कम भएका अंगमा बढी काउकुती लाग्छ, जस्तो पेट र पाइताला । काउकुती दुईथरीका हुन्छन् : निसमेसिस र गार्गालेसिस । निसमेसिसमा शरीरमा हलुका स्पर्श हुँदा पनि छालाले मस्तिष्कलाई तत्कालै सन्देश पु–याउँछ । गार्गालेसिसमा चाहिँ पेट, कोखा र गलामा औंलाले छुँदा काउकुती लागेर हाँसो छुट्छ ।
यसको उल्टो हामीले अर्को व्यक्तिलाई काउकुती लगाउँदा हामीमा कुनै पनि भय रहँदैन र हाम्रो दिमागको अन्य भागबाट प्राप्त संवेदात्मक संकेत नियन्त्रणमा रहन्छ । यसले गर्दा हामीलाई आफैंलाई काउकुती लगाउँदा हाँसो नउठेको हो । तर काउकुती लगाउँदा हाँसो उठ्ने नउठ्ने कुरा दिमागको स्थितिमा पनि भर पर्छ ।
रौतहटका युवा बैठाको मलेसियामा मृत्यु, अचानक पेट दुखेपछि थिए अचेत?
निजि बिद्यालय भन्छन्: बिद्यालय चाडै खोल्नुपर्छ तर शिक्षामन्त्रालय भन्छ: खोल्ने अवस्था छैन?
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० लाख ७४ हजार नाघ्यो?